SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 72 of 174 - https://themummichogblog.com
Atọ nke ndị Amara
Gịnị mere tad abịa na atọ dị iche iche nke echiche? Ntak anọ ma ọ bụ ise ma ọ bụ isii?
N’ihi na ọ bụ smart. Ọ maara na ike nke “atọ.” Ọkà n’akparamàgwà mmadụ achọpụtala na, mgbe ị na-agbalị ime ka ndị mmadụ, atọ nzọrọ ndị kwenye, abụọ bụ mgbe ọ bụghị ezu, ma anọ nwere ọtụtụ. Prọfesọ Suzanne B. Shu na Kurt A. Carlson sịnụ, “More nzọrọ ndị mma ruo mgbe anọ na-ekwu, na nke oge [ege ntị] ahụ ihe niile na-ekwu obi abụọ.” The na-eme nnyocha na-akpọ nke a mmetụta nke “mmasi nke atọ,” na-enyo ya nwere ihe na-eme na otú mmadụ nkịtị nwere ike ijikwa na-adịghị adịte ebe nchekwa. 
N’ezie, oké na-ekwurịta okwu mgbe nile mara ihe banyere amara nke atọ; na ihe mere na ha na-emekarị ugbu atọ echiche, atọ isi ihe, ma ọ bụ atọ Nchoputa na-akwado a na-azọrọ. Lincoln kwuru banyere “ọchịchị nke ndị mmadụ, ndị mmadụ, na maka ndị mmadụ.” The French na-ekwu okwu nke “nnwere onwe, hara nhata, na fraternity.” Caesar kwuru, “m wee, m hụrụ, m meriri.” (Rịba ama na anyị dị nnọọ nyere gị ihe atụ atọ.)
“Ọ dịghị onye nwere ike na-echeta ihe karịrị atọ ihe.”
Akụkọ, songs, na njakịrị juputara threes ( “atọ ụmụ okorobịa na-eje ije n’ime a mmanya …”). Naturalist Diane Ackerman egosipụta na ụkpụrụ a: “Anyị na-na na na otú na ịhụnanya na ihe nakawa etu esi na anyị obsessively ike anyị nwere, ọtụtụ mgbe threesomes, dị ka ụtụtụ, n’etiti-ehihie, na abalị; Macbeth atọ weird nwaanyị; ndị amamihe atọ; njikere, setịpụrụ, na-aga; a sonata bụ atọ akụkụ ụdị; na Genie na-arịọrọ atọ ọchịchọ ya; obere, ọkara, na nnukwu; ABCs; Goldilocks na atọ anụ ọhịa bea; atọ obere ezì; were gabazie. Atọ yiri ka anyị ụkpụrụ nke oke. “
Cheta, anyị kwuru okwu gị bụ n’akụkụ atọ; na Intro, ahụ, na ọgwụgwụ. Ya mere ugbu a, i nwere atọ isi ihe na ahụ na-akwado gị nzube. Ugbu a ị na-ekpebi ihe iji na-etinye ha na.
Olee otú i kwesịrị na-ewetara gị ihe?
Anyị maara na ndị mmadụ na-echeta mbụ na ikpeazụ ihe ha na-anụ. Ha na-echeta ọtụtụ ugboro ozi. Ụkpụrụ dị mfe: Mee ka gị na ebe mbụ na ikpeazụ na-ugboro ugboro ga-enyere ndị mmadụ na-echeta na-aghọta ya.
Anyị niile maara na ebe nchekwa bụ leaky, na anyị na-echeta naanị ibe n’ibe na iberibe ihe anyị na-anụ, na na a ọtụtụ ihe anyị na-eche na anyị na-echeta bụ ihe ọjọọ. Ọkà n’akparamàgwà mmadụ na-ekwu, “Site na nghọta na ebe nchekwa na e nwere ọtụtụ ohere maka ozi ka ọhụma koodu”  -n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ndị na-ege ntị dị nnọọ agaghị enweta ya ma ọ bụrụ na ị bee ha na ohere ghọtahie gị.
Nke ahụ pụtara na-ekwu mbụ ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ na-echeta-na-ekwughachi ya ikpeazụ. Nke a na-enye isi ihe mesiri ike. Ị ga-akwụsịlata na-ekwu okwu n’ụzọ doro anya mgbe ị nyefee isi ihe. Dị ka CUNY prọfesọ na ọkachamara na dijitalụ nkwurịta okwu Cathy Davidson, “Mgbe ị na-ewebata ngwaahịa na mmalite nke azụmahịa na mgbe ị nyefee ntụmadị akara na njedebe, gị ekwu bụ ukwuu iji nwayọọ na okwu gị na-ọma e-nọn-CI -bụ-Ted. “
Ị ga-ekwu na onye ọ bụla isi ihe, na-akwado ya, na ichikota ya. Anyị na-akpọ na Triple S Formula.
Olee nke bụ nke ndị a ihe atụ abụọ dị mfe ịghọta?
Ihe Nlereanya 1:
“The zippers na seams na-enịm ịkpọlite ​​ndị permeability akpata site banyere 2 lita kwa mita há nhata kwa nke abụọ. Ọzọkwa, ndị uwe na-ubé undersized n’ihi na ike na-atụ bụ chebaara uwe size na-eme ka a dị iche nke banyere 7 percent na aerodynamic ikpuru, dị ka a slide na-egosi. Site undersizing anyị ike welie permeability dịkarịa ala 2 lita ma eleghị anya, ndị ọzọ. Ma ezigbo ihe itunanya bụ a textured, dimpled-ikpa efe sharkskin Ọdịdị. N’okpuru otu kọmputa mikroskopu ke ifufe ọwara a Ọdịdị na-egosi na inwe ike banyere 7 lita ọzọ permeability n’elu a 250 mita ife efe N’ezie. ”
Ihe Nlereanya 2:
“The uwe e mere na-banyere 11 lita ọzọ permeable karịa ndị ọzọ suut na ahịa. A bụ otú o mgbari:
“Anyị na-enweta 7 lita anyị itunanya imewe eji textured, dimpled-ikpa efe sharkskin, nke anyị gosiri na iji ihe elektrọn microscope na a ifufe ọwara simulating a 250 mita ife efe N’ezie.
“Anyị na-enweta 2 ọzọ lita site ubé undersizing ndị uwe, nke na-egbupu banyere 7 percent nke aerodynamic ikpuru.
“Ma anyị na-2 ọzọ lita kwa mita há nhata kwa abụọ site redesigning na zippers na seams.
“Nke ahụ na-agbakwụnye ruo 11 ọzọ lita permeability karịa ihe ọ bụla ọzọ na uwe.”
Gịnị ka ị na-achọpụta na dị iche n’etiti abụọ nsụgharị?
Nke na otu onye bụ ndị ọzọ nghọta? N’ihi gịnị?
Gịnị mere chịkọta-eje ozi?
Ọ bụ ezie na nkọwa bụ ukwuu oru, ọtụtụ n’ime anyị nwere ike iso Ihe Nlereanya 2 nnọọ mma karịa Nlereanya 1. The isi na-abịa elu n’ihu ( “ị na 11 ọzọ lita nke ikuku anyị na uwe”); mgbe ahụ, mgbe atọ n’akwụkwọ akwado data, na nchịkọta ikpe ekedo ụta na ngwugwu.
Rịba ama na peeji nke 71 otú tad eji planner ngwá ọrụ ịzụlite a isi ihe.
The ụkpụrụ ebe a dị mfe: ugboro ugboro a mgbe na-eme ka ọ dịrị ya mfe icheta. Site ugboro ugboro ị ciment n’ime ụbụrụ ha ọhụrụ nghọta, na “aha!” oge na akọwa a paradigm. Professional persuaders maara nke ọma ụkpụrụ a; dị ka Malcolm Gladwell na-ekwu, “Ghọta ihe Nike na Coca-Cola ịghọta: ọ bụrụ na ha nwere ike ime ka ha ụdị ubiquitous-ma ọ bụrụ na ha nwere ike plaster ha na bọọdụ mkpọsa, na ngwaahịa ngosipụta n’ime nri na-echekwa, na mma-store windo, ndị dị n’akụkụ ụlọ , on T-Chiefs na baseball okpu, na hoods na n’elu ọduọ ụgbọala, na yi na-agbasa na iri na ụma magazin-ha nwere ike ime ka ha ozi-agaghị ekwe omume na-eleghara. The nzuzo abụghị aghụghọ ma ugboro ugboro, ọ bụghị Artful spinning ma larịị ikwu okwu. “
Nzube gị bụ ime ka ozi gị agaghị ekwe omume na-eleghara, itinye aka na reengage ndị ụbụrụ-ege gị ntị. Ị na-eme nke ahụ site n’ikwu, na-akwado, na chịkọta ọ bụla isi ihe.
prime pagine di oggi – 12 Giugno 202013/06/2020
Gzira Appartamento situato nella parte migliore co
Padre Fenech che morto doveva ricevere munizioni